RAR Qalabka Dayactirka. RAR Soo kabashada Software. Dayactir RAR Faylasha.
DataNumen RAR Repair waa ugu fiican RAR qalabka dayactirka iyo soo kabashada adduunka. Waxay hagaajin kartaa musuqmaasuqa RAR kaydso oo dib u soo cesho inta ugu badan ee xogtaada intii suurtagal ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,600 cod)
maxaad DataNumen RAR Repair?
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee a RAR soo kabashada. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen RAR Repair leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, aad uga fiican tartamayaasha kale, oo uu ku jiro WinRAR iyo kuwa kale RAR qalabka dayactirka, suuqa!
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen RAR Repair sigaar cabaya tartanka
Wax dhibaato ah kuma qabin barnaamijkan wanaagsan. Eray ku socota dadkaas laga yaabo inay dhibaatooyin soo mareen. Haddii 'DataNemen' Rar Barnaamijka Dayactirka
Liverpool. Boqortooyada Ingiriiska
Sebtember 6th, 2014
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka tago quudinta-dib-u-celinta ku saabsan ka-qayb-qaadashadayda wanaagsan ee alaabtaada _ talooyin qaarkood sidoo kale ku saabsan cillad la'aanta
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen RAR Repair v3.5
Taageero lagu dayactirayo dhammaan noocyada RAR iyo faylasha SFX.
Taageero si loo soo celiyo mugga badan iyo kaydadka adag.
Taageero si loo soo celiyo kaydka sirta lagu duubay
Taageero si loo helo oo loo xusho RAR iyo keydadka SFX ee lagu dayactirayo kombiyuutarka deegaanka.
Taageero lagu dayactirayo RAR faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah RAR iyo faylasha SFX.
Taageero lagu dayactirayo RAR kaydadka ugu ballaaran ee 8, 388, 608 TB (ie 8, 589, 934, 592 GB).
Taageerada isdhexgalka ee Windows Explorer, markaa waad dayactiri kartaa a RAR ku xaji liiska macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen RAR Repair inuu ka soo kabsado Khasaaraha RAR archive
Marka aad RAR keydku wuu waxyeeloobay ama wuu xumaaday sababo kala duwan awgood oo si caadi ah uma furi kartid, waad isticmaali kartaa DataNumen RAR Repair si loo baaro RAR keydso oo soo ceshano feylasha ku jira inta ugu macquulsan.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo ceshan wixii dhaawac ama musuqmaasuq ah RAR kaydso leh DataNumen RAR Repair, fadlan xir WinRAR iyo codsi kasta oo kale oo laga yaabo inuu marin u helo RAR keyd
Xullo waxyeelada ama musuqmaasuqa RAR Archive in la dayactiro:
Waad ku dari kartaa RAR si toos ah magaca arjiga ama guji
badhanka si aad u isticmaashid oo aad u dooratid arjiga. Waxa kale oo aad riixi kartaa
badhanka si aad u hesho RAR keydka lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Marka la eego, DataNumen RAR Repair soo kaban doonaa oo soo saaro faylasha ku jira RAR ku keydi galka la yiraahdo xxxx_recovered, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha RAR keyd Tusaale ahaan, il ahaan RAR Archive Waxyeellorar, Buugga wax soo saarka ee soo baxa ah ayaa Damage_recovered. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
batoonka, iyo DataNumen RAR Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta isha RAR faylka. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii isha laga helo RAR faylka si guul leh ayaa loo dayactiri karaa, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hadda waxaad furi kartaa galka wax soo saarka ee ku qeexan tallaabada 3 oo hubi faylasha la soo celiyey ee ku dhex jira.
DataNumen RAR Repair 3.5 waxaa la sii daayay 3-da Maajo, 2021
DataNumen RAR Repair 3.2 waxaa la sii daayay Diseembar 18, 2020
DataNumen RAR Repair 3.0 waxaa la sii daayay Nofeembar 4th, 2020
DataNumen RAR Repair 2.9 waxaa la sii daayay Sebtember 9th, 2020
Hagaajinta waxsoosaarka jirkarary faylasha
DataNumen RAR Repair 2.8 waxaa la sii daayay Abriil 19, 2020
Hagaajinta saxnaanta soo kabashada iyo heerka soo kabashada.
DataNumen RAR Repair 2.7 waxaa la sii daayay Nofeembar 18th, 2019
DataNumen RAR Repair 2.6 waxaa la sii daayay Luulyo 24th, 2019
DataNumen RAR Repair 2.5 waxaa la sii daayay Juun 28th, 2018
DataNumen RAR Repair 2.3 waxaa la sii daayay Abriil 20, 2018
Hagaajinta dib u soo kabashada ee la xareeyay RAR diiwaanada
DataNumen RAR Repair 2.2 waxaa la sii daayay Sebtember 19, 2016
DataNumen RAR Repair 2.1 waxaa la sii daayay 14 Sebtember 2013
DataNumen RAR Repair 2.0 waxaa la sii daayay 6 Luulyo, 2013
Taageero GuulRAR v5.x.
Dib u qor bogga adeegsadaha.
DataNumen RAR Repair 1.2 waxaa la sii daayay Sebtember 27, 2006
Taageerada lagu soo rogo musuqmaasuq RAR ama keydka SFX ee server-keena ftp.
Taageero si loo soo kiciyo tusayaasha gudaha RAR diiwaanada
Hagaaji habka qaladka soo kabashada.